Fiainam-pianarana isan'andro amin'ny sekoly Walddorf
Sekolin'i Waldorf: mianatra tsy misy tahotra
Nahazoana diplaoma tamin'ny sekoly Waldorf
Sekolin'i Polarize Waldorf. Ny sasany manao fianianana amin'ny foto-kevitr'i Rudolf Steiner, ny hafa mitsiky amin'izany. Ilay teny malaza ratsy: Tsia, tsy mbola afaka manoratra ny anarako aho, fa afaka mandihy azy io, matetika dia maneho ny fijerin'ny mpanohitra Waldorf.
Ny fototry ny sekoly Waldorf
Ireo izay tsy ao amin'ny fahalalana dia somary mitsikera na manambany ny fanabeazana Waldorf iray manontolo. Betsaka no tsy mahalala akory izay tena ao ambadiky ny sekoly Waldorf sy ny foto-kevitr'izy ireo. Araka ny voalaza etsy ambony, ireo sekoly ireo dia natsangan'i Rudolf Steiner ary miorina amin'ny anthroposophy. Any Alemana, ity karazana sekoly ity dia heverina ho sekoly mpisolo toerana.
Ny sarintanin'ny olona anthroposophical olona iorenan'ny sekoly Waldorf dia miverina amin'ny esoterisma ary miorina amin'ny fitsipiky ny fitoviana, ny firahalahiana ary ny fahalalahana. Ankoatr'izay, ny olona dia mandray ny firafitry ny olombelona amin'ny vatana, saina ary fanahy ho toy ny fototra ary miorina amin'ny fahaizan'ny fanahy koa: fisainana, fahatsapana, fanekena. Tena ilaina koa ny mitandrina ny fahafito amin'ny taona.
Ity farany dia miorina amin'ny hevitra fa ny olombelona na ny faritra misy azy dia mandalo fiterahana lehibe isaky ny fito taona. Ny fototry ny sekoly Waldorf dia holavin'ny olona maro, indrindra amin'ny fiarahamonina iray izay voafaritry ny teknolojia sy ny fisainana misaina.
Eto anefa dia mila manontany tena ianao raha ny fomba fiainantsika manokana dia midika hoe maro ny ankizy no tsy mahazaka fiainana andavanandro intsony. Ny aretina tsy mazava sy mihombo mihombo toy ny aretin-tsaina tsy fahampian'ny saina dia manondro mazava fa ny fiarahamonintsika dia manana fiaviana. Ilaina ny miverina mieritreritra ny fampidirana ireo ankizy izay tsy mahazaka ny tsindry mihombo ateraky ny fitomboan'ny fitakiana.
Any amin'ny sekoly Walddorf, ny torolàlana amin'ny vanim-potoana dia manjaka eo amin'ny fiainana an-tsekoly isan'andro. Io lohahevitra io ihany no resahina mandritra ny herinandro maromaro, mazàna adiny roa amin'ny fiantombohan'ny fianarany. Ny ankamaroany dia taranja toa ny Alemanina na matematika, fahalalana manokana na biolojia.
Manomboka amin'ny kilasy voalohany dia misy lesona amin'ny fiteny vahiny, ao anatin'izany ny fiteny roa, ka ny fiteny vahiny fahatelo dia azo ianarana amin'ny kilasy dimy. Ankoatr'izay, atolotra ny lohahevitra momba ny asa tanana sy ny kanto, ao anatin'izany ny eurythmy. Io no teôria momba ny hetsika tsara tarehy, na ny fahaizana maneho sy mampita tononkalo sy teny amin'ny vatana iray manontolo.
Ny mpanorina ny eurythmy dia Rudolf Steiner - ary ny fandihizana ny anarany manokana dia azo antoka fa hiverina amin'ity lohahevitra ity. Ny fandrafetana, ny fambolena, ny fanjairana, ny fihodinana, ny famatahana boky ary ny teknolojia dia tsy voatery ary miankina amin'ny ambaratonga naoty amin'ny fandaharam-pianarana.
Tsy dia hahita boky ao amin'ny sekoly Waldorf ianao amin'ny taona voalohany nianarana. Fa kosa, ny ankizy dia manomana bokikely epoch izay ampian'izy ireo hamorona ary misy ny naoty rehetra. Ity bokikely ity dia mandray anjara lehibe amin'ny fanombanana ny fahombiazana. Ny mpampianatra dia tsy mampifantoka ny lesona arakaraka ny lalàna henjana, fa araka ny tontolon'ny fihetsem-po ho an'ny ankizy.
Ny atiny sy ny fomba fampianarana dia ampifanarahana amin'ny ambaratongam-pivoaran'ny zaza. Eto, ny zaza dia tsy tsaraina noho ny haavon'ny fahombiazany ary apetraka ao anaty vatasarihana, fa ny zaza kosa dia jerena amin'ny ankapobeny. Zavatra izay atao dokambarotra any amin'ny sekoly mahazatra mahazatra, saingy tsy ampiharina.
Raha esorina ny tsindry naoty sy ny fampitahana tsy tapaka ny zava-bitany manokana amin'ny hafa dia mazàna mianatra mora kokoa sy tsara kokoa ny zaza. Ny antony tahotra dia manome làlana ho an'ny fianarana milamina, izay mahafinaritra sy manentana. Tsy misy izany hoe mipetraka izany.
Raha te handefa ny zanakao any amin'ny sekoly Walddorf ianao dia tsy mila miahiahy fa tsy ho afaka hiatrika ny fiainana any aoriana satria hozahan-tànana fonon-tanana any izy ireo. Misy ihany koa ny tombana tombana amin'ny sekoly Waldorf, fa an-tsoratra fa tsy miorina amin'ny naotiny. Na izany aza, ny ray aman-dreny dia afaka miziriziry amin'ny naoty ambony kokoa. Azo atao ihany koa ny mamita ny mari-pahaizana rehetra miala amin'ny sekoly any amin'ny sekoly Waldorf. Betsaka koa no tsy mahalala an'izany.
Manana fanontaniana, sosokevitra, tsikera ve ianao sa mahita bibikely? Aza misalasala mifandray aminay na mamela hevitra.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 3. Jona 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fampianarana, akaninjaza & sekolyKeywords am-pianarana, karazana sekoly, Misafidy ny sekoly mety, Waldorf, Fanabeazana Waldorf, Waldorf School
indray Lahatsoratra taloha: Karaiba | Dia fitsangatsanganana
more Lahatsoratra manaraka: Tsy amin'ny toe-tsaina ho an'ny akaninjaza